Fadzwa Nekushanda Nesimba | Rudo rwaMwari
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Assamese Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Bengali Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuabo Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Douala Dutch Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Guna Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Ibanag Icelandic Iloko Indonesian Japanese Jula Kabiye Kannada Kazakh Kekchi Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kosraean Krio Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Lhukonzo Lithuanian Lomwe Low German Luganda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe Mizo Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngabere Ngangela Niuean Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Ossetian Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Romanian Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tahitian Tajiki Tamil Tarascan Tatar Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Totonac Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uzbek Venda Vezo Wallisian Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
‘Munhu wose ngaafadzwe nezvinhu zvakanaka pabasa rake rose rakaoma.’—MUPARIDZI 3:13.
1-3. (a) Vanhu vakawanda vanonzwa sei nezvemabasa avo? (b) Bhaibheri rinokurudzirei nezvokushanda, uye mibvunzo ipi yatichakurukura muchitsauko chino?
VANHU vakawanda nhasi havanakidzwi nokushanda. Pakwayedzera, vanozeza kuenda kubasa nokuti vanofondoka muswere wose pabasa risingavanakidzi. Vanhu vakadaro vangakurudzirwa sei kuti vafarire basa ravo uye kuti vagutsikane naro?
2 Bhaibheri rinokurudzira kufarira kushanda nesimba. Rinotaura kuti kushanda uye zvatinozowana chikomborero. Soromoni akakurudzira kuti “munhu wose adye, anwe, uye afadzwe nezvinhu zvakanaka pabasa rake rose rakaoma. Icho chipo chaMwari.” (Muparidzi 3:13) Jehovha anotida uye anoda kuti zvinhu zvitifambire zvakanaka, saka anoda kuti tigutsikane nebasa redu uye tifadzwe nezvatinowana mariri. Kuti tirambe tiri murudo rwake, tinoda kurarama zvinoenderana nemaonero ake uye mitemo yake pamusoro pebasa.—Verenga Muparidzi 2:24; 5:18.
3 Muchitsauko chino, tichakurukura mibvunzo mina: Tingafadzwa sei nekushanda nesimba? Mabasa akaita sei asingaitwi nomuKristu wechokwadi? Tingaita sei kuti basa redu rokunyika risakanganise kunamata kwedu? Uye ibasa ripi rinokosha kupfuura ose ratinogona kuita? Zvisinei, ngatitangei nokuongorora muenzaniso wevashandi vakuru kupfuura vose, Jehovha Mwari naJesu Kristu.
MUSHANDI MUKURU NEMHIZHA
4, 5. Bhaibheri rinoratidza sei kuti Jehovha mushandi anobudirira?
4 Jehovha ndiye Mushandi Mukuru. Genesisi 1:1 inoti: “Pakutanga Mwari akasika matenga nenyika.” Paakapedza basa rake rokusika pasi pano, Mwari akati zvakanga “zvakanaka kwazvo.” (Genesisi 1:31) Nemamwe mashoko, akagutsikana zvizere nebasa rake pasi pano. Hapana mubvunzo kuti Jehovha, “Mwari anofara,” akafadzwa zvikuru nokuva mushandi anobudirira.—1 Timoti 1:11.
5 Mwari wedu anoshanda nesimba haatombomiri kushanda. Nguva refu pashure pokusikwa kwepasi nezvinhu zvose zviri pariri, Jesu akati: “Baba vangu vave vachishanda kusvikira zvino.” (Johani 5:17) Baba vanga vachiitei? Vari kudenga, vagara vachishingaira zvechokwadi pakutungamirira vanhu nokuvachengeta. Vakaita kuti pave ‘nechisikwa chitsva,’ vaKristu vakaberekwa nomudzimu vachazotonga naJesu kudenga. (2 VaKorinde 5:17) Vari kushanda kuti chinangwa chavo chine chokuita nevanhu chizadzike, kuti vaya vanovada vawane upenyu husingaperi munyika itsva. (VaRoma 6:23) Jehovha anofanira kunge ari kufadzwa nezviri kubva mubasa iri. Mamiriyoni evanhu ari kubvuma shoko roUmambo, vachiitwa kuti vauye kuna Mwari vogadzirisa upenyu hwavo kuti varambe vari murudo rwake.—Johani 6:44.
6, 7. Jesu akabvira kare zvakadii achishanda nesimba?
6 Jesu ane mukurumbira unobva kure wokushanda nesimba. Asati auya pasi pano somunhu, akashanda ari “mhizha” yaMwari pakusikwa kwezvinhu zvose “zviri kumatenga nezviri panyika.” (Zvirevo 8:22-31; VaKorose 1:15-17) Ava pasi pano, Jesu akaramba achishanda nesimba. Achiri muduku, akadzidza basa rokuvaka, achizivikanwa ‘somuvezi.’ * (Mako 6:3) Basa iri nderembabvu uye rinoda unyanzvi, zvikurukuru paraiitwa kusati kwava nemichina yokucheka mapuranga, zvitoro zvinotengesa zvokuvakisa uye midziyo yemagetsi. Ungafungidzira here Jesu achienda kunozvitsvagira matanda, pamwe achitotema miti okakaritsana nematanda acho achiaendesa chero kwaaishandira? Ungafungidzira here achivaka imba, achigadzira denga rayo nokuriturika, achiveza madhoo uye kunyange mimwe midziyo yokuisa mumba macho? Hapana mubvunzo kuti Jesu akanyatsozvionera kugutsikana kunobva pabasa rakaoma rinenge raitwa nounyanzvi.
7 Jesu aishanda nesimba zvinoshamisa muushumiri hwake. Kwemakore matatu nehafu, akanga akabatikana nebasa iri rinokosha zvikuru. Kuti ataure nevanhu vakawanda sezvaibvira, akanyatsoshandisa nguva yake, achimukira uye achishanda kusvika usiku. (Ruka 21:37, 38; Johani 3:2) Akafamba “muguta neguta uye mumusha nomusha, achiparidza nokuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari.” (Ruka 8:1) Jesu akafamba mitunhu netsoka mumigwagwa ine guruva achienda nemashoko akanaka kuvanhu.
8, 9. Chii chakaita kuti Jesu afadzwe nebasa rake?
8 Jesu akafadzwa nekushanda nesimba muushumiri here? Hongu! Akadyara mbeu yechokwadi choUmambo, ndokusiya minda yakanga yaibva kuti ikohwewe. Kuita basa raMwari kwakasimbisa Jesu kukava sezvokudya zvokuti aisarudza kurega kudya kuti aite basa iroro. (Johani 4:31-38) Funga kuti anofanira kunge akagutsikana sei paakapedza ushumiri hwake pasi pano achiti kuna Baba vake: “Ndakakukudzai panyika, ndapedza basa ramakandipa kuti ndiite.”—Johani 17:4.
9 Zvechokwadi Jehovha naJesu ndivo mienzaniso mikuru yevanhu vanofadzwa nekushanda nesimba. Kuda kwatinoita Jehovha kunoita kuti tive “vatevedzeri vaMwari.” (VaEfeso 5:1) Kuda kwatinoita Jesu kunoita kuti ‘tinyatsotevera tsoka dzake.’ (1 Petro 2:21) Saka ngatichionai zvatingaita kuti tifadzwe nekushanda nesimba.
TINGAFADZWA SEI NEKUSHANDA NESIMBA?
Kushandisa zvinotaura Bhaibheri kunogona kukubatsira kuti ufadzwe nokushanda nesimba
10, 11. Chii chingatibatsira kuti tifarire basa redu?
10 Basa rokunyika rine nzvimbo yaro muupenyu hwemuKristu. Tinoda kugutsikana uye kufadzwa nokushanda, asi izvi hazvisi nyore kana tichishanda basa ratisingadi. Tingafadzwa sei nebasa redu kana tiri mumamiriro ezvinhu akadaro?
11 Nokuva nemaonero akanaka. Hapasi pose patinogona kuchinja mamiriro ezvinhu, asi tinogona kuchinja maonero atinoita zvinhu zvacho. Kufungisisa maonero anoita Mwari kungatibatsira kuona basa zvakanaka. Somuenzaniso, kana uri musoro wemba, ziva kuti basa rako, kunyange rikava rinoshoreka, rinokuita kuti uwanise mhuri yako chouviri. Saka kuriritira mhuri yako inyaya inokosheswa zvikuru naMwari. Shoko rake rinoti munhu asingaiti izvozvo “akaipa kwazvo kupfuura munhu asingatendi.” (1 Timoti 5:8) Kuziva kuti basa rako rinoita kuti uite zvawakanzi naMwari unofanira kuita, kuchakubatsira kuva anogutsikana uye ane chinangwa kupfuura vamwe vaunoshanda navo.
12. Kushanda nesimba uye kutendeseka kune mibayiro yei?
12 Nokushanda nesimba uye nokuva akatendeseka. Kushanda nesimba uye kudzidza kuita basa zvakanaka kunounza zvikomborero. Vanhu vanoshanda nesimba uye vane unyanzvi vanodiwa zvikuru nevavanoshandira. (Zvirevo 12:24; 22:29) SevaKristu vechokwadi, tinofanirawo kuva vakatendeseka pabasa, tisingabe mari, zvinhu, kana nguva. (VaEfeso 4:28) Sezvatakaona muchitsauko chapfuura, kutendeseka kune mibayiro. Mushandi anozivikanwa kuti akatendeseka anowanzovimbwa naye. Kunyange watinoshandira akasacherechedza kuti tinoshanda nesimba, tinogona kugutsikana nokuti tinenge tiine “hana yakatendeseka” uye tinenge tichifadza Mwari watinoda.—VaHebheru 13:18; VaKorose 3:22-24.
13. Zvinhu zvakanaka zvatinoita tiri pabasa zvinogona kubatsira sei vamwe?
13 Nokuziva kuti kuzvibata kwatinoita kunogona kukudza Mwari. Kana tichigara tichizvibata sevaKristu pabasa, vamwe vanowanzocherechedza. Zvichizobatsirei? Tikadaro, tinogona ‘kushongedza dzidziso yoMuponesi wedu, iye Mwari.’ (Tito 2:9, 10) Hongu, kuzvibata kwedu zvakanaka kunogona kuita kuti vamwe vaone kunaka kwemanamatiro edu, zvovakwezva kuti vauyewo. Imbofunga kuti unganzwa sei kana munhu waunoshanda naye akagamuchira chokwadi aona zvakanaka zvaunoita pabasa! Chifunga izvi zvinotonyanya kukosha: Mubayiro upi unopfuura kuziva kuti kuzvibata kwako kwakanaka kunokudza Jehovha uye kunofadza mwoyo wake?—Verenga Zvirevo 27:11; 1 Petro 2:12.
KUSARUDZA BASA NOUNGWARU
14-16. Patinotarisana nenyaya yokusarudza basa, mibvunzo ipi inokosha yatinofanira kuzvibvunza?
14 Bhaibheri haridonongodzi kuti mabasa api okunyika atinofanira kuita neatisingafaniri. Izvi hazvirevi kuti tinongoti chamuka inyama. Magwaro anogona kutibatsira kusarudza basa rinogona kutipa pundutso, rinoitwa nokutendeseka uye rinofadza Mwari, tichisiya riya risingamufadzi. (Zvirevo 2:6) Patinotarisana nenyaya yokusarudza basa, pane mibvunzo miviri inokosha yatinofanira kuzvibvunza.
15 Kushanda basa iri kungareva here kuti ndinenge ndatoita zvimwe zvinhu zvinorambidzwa neBhaibheri? Shoko raMwari rinorambidza zviri pachena kuba, kunyepa, uye kugadzira zvifananidzo. (Eksodho 20:4; Mabasa 15:29; VaEfeso 4:28; Zvakazarurwa 21:8) Tinoramba mabasa anoita kuti tiite zvinhu zvakadaro. Kuda Jehovha kunoita kuti tisambofa takabvuma kuita basa rinosanganisira kuita zvinhu zvinotyora mitemo yaMwari.—Verenga 1 Johani 5:3.
16 Kushanda basa iri kungaita kuti nditsigire zvinhu zvakaipa here? Funga muenzaniso unotevera. Hapana chakaipa nokushanda panosvikira vaeni pakambani. Zvisinei, zvakadii kana muKristu akawana basa rakadaro pakiriniki yakamirira zvokubvisa vanhu pamuviri? Ichokwadi kuti iye pachake haaiti basa rokubvisa vanhu pamuviri. Zvisinei, basa rake iroro rinenge risiri kutsigira zvinoitwa pakiriniki iyoyo zvinopesana neShoko raMwari here? (Eksodho 21:22-24) Sevanhu vanoda Jehovha hatidi kuita zvinhu zvinoita kuti titsigire maitiro anopesana nezviri muMagwaro.
17. (a) Zvii zvinoda kufungwa nezvazvo patinenge tichisarudza basa? (Ona bhokisi rakanzi Ndopinda Basa Iri Here?.) (b) Hana yedu ingatibatsira sei kusarudza zvinofadza Mwari?
17 Nyaya zhinji dzokusarudza basa dzinogona kugadziriswa nokuongorora mhinduro dzemibvunzo miviri inokosha yakurukurwa mundima 15 ne16. Pane zvimwe zvatinofanira kufunga nezvazvo patinosarudza basa. * Hatingatarisiri muranda akatendeka kutipa mitemo inoenderana nemamiriro ose ezvinhu angamuka. Apa ndipo panoda ungwaru. Sezvatakadzidza muChitsauko 2, tinofanira kudzidza kushandisa Shoko raMwari zuva nezuva kuti hana dzedu dzidzidze uye dzijairire. Kana ‘simba redu rokunzwisisa’ rarovedzwa kuburikidza “nokurishandisa,” hana dzedu dzinogona kutibatsira kusarudza zvinofadza Mwari toramba tiri murudo rwake.—VaHebheru 5:14.
NDOPINDA BASA IRI HERE?
Rugwaro rwungakutungamirira: “Itai zvinhu zvose kuti Mwari akudzwe.”—1 VaKorinde 10:31.
Basa racho rinosanganisira zvimwe zvinhu zvinorambidzwa neShoko raMwari here?—Eksodho 20:13-15.
Kuriita kungaita kuti ndibatsire pakuita zvinhu zvinorambidzwa here?—Zvakazarurwa 18:4.
Rinongovawo rimwe remabasa anoitirwa kubatsira vanhu, iro pacharo risingarambidzwi neMagwaro here?—Mabasa 14:16, 17.
Chii chichaitika kana ndikaita basa racho; ndichakuvadza hana dzevamwe here?—VaRoma 14:19-22.
Ndikaenda kunoshanda kunze kwenyika ndichisiya mhuri yangu, ichanzwa sei uye ichanamata sei?—VaEfeso 5:28–6:4.
KOSHESA BASA ZVINE MWERO
18. Nei zvisiri nyore kuti tirambe takasimba pakunamata?
18 Kuramba wakasimba pakunamata hakusi nyore mazuva ano “okupedzisira” ane “nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo.” (2 Timoti 3:1) Kuwana basa woramba uri pariri kwakaoma. SevaKristu vechokwadi, tinoziva kuti kushanda nesimba kuti tiriritire mhuri dzedu kunokosha. Asi tikasangwarira, kuwanda kwebasa uye mafungiro enyika okuda kuunganidza upfumi anogona kukanganisa kunamata kwedu. (1 Timoti 6:9, 10) Ngatikurukurei kuti tingaziva sei “zvinhu zvinokosha kupfuura zvimwe” panyaya dzebasa.—VaFiripi 1:10.
19. Nei Jehovha akakodzera kuti tivimbe naye zvakazara, uye kuvimba kwakadaro kuchatibatsira kuti tisadii?
19 Vimba naJehovha zvakazara. (Verenga Zvirevo 3:5, 6.) Haakodzeri here kuti tivimbe naye zvakadaro? Inga wani ane hanya nesu? (1 Petro 5:7) Anoziva zvatinoda kutipfuura, uye haatombotadzi kutipa zvokurarama nazvo. (Pisarema 37:25) Saka tingaita zvakanaka tikateerera Shoko rake parinotiyeuchidza kuti: “Mararamiro enyu ngaave okusada mari, muchigutsikana nezvinhu zvinenge zviripo. Nokuti [Mwari] akati: ‘Handingambokuregerei kana kumbokusiyai.’” (VaHebheru 13:5) Vashumiri vaMwari vari mubasa renguva yakazara vanomupupurira kuti anopa zvokurarama nazvo. Kana tichivimba zvakazara kuti Jehovha achatichengeta, ticharega kuzvidya mwoyo zvakanyanya nezvokuti tichapei mhuri dzedu. (Mateu 6:25-32) Hatizosiyi basa rokunyika richititadzisa kuita zvinhu zvokunamata zvakadai sokuparidza mashoko akanaka nokupinda misangano.—Mateu 24:14; VaHebheru 10:24, 25.
20. Zvinorevei kuva neziso rakanaka, uye tingaramba sei tiinaro?
20 Ramba uine ziso rakanaka. (Verenga Mateu 6:22, 23.) Ziso rakanaka rinoreva kuva noupenyu husina zvinhu zvakawanda. Ziso rakanaka romuKristu rinongova pakuita kuda kwaMwari chete. Kana ziso redu rakadaro, hatizogara tichizvidya mwoyo nezvokuwana basa rinopa mari yakawanda uye mararamiro oumbozha. Hatizotorwawo mwoyo nezvinhu zvichangoburwa izvo zvinongogara zvichinzi nevashambadzi tinofanira kuva nazvo kuti tifare. Ungaramba sei uine ziso rakanaka? Usazviremedza nezvikwereti zvisina nebasa rese. Rega kuzviwanzira zvinhu zvinokupedzera nguva yakawandisa. Teerera zano reBhaibheri rokugutsikana ‘nezvokudya nezvokupfeka.’ (1 Timoti 6:8) Edza nepaunogona napo kuva neupenyu husina zvakawanda.
21. Nei tichifanira kuronga zvinhu zvedu maererano nokukosha kwazvo uye ndezvipi zvatinofanira kuisa pakutanga?
21 Isa zvinhu zvekunamata panzvimbo yokutanga, uye zvoramba zviri ipapo. Sezvo tisingagoni kuita zvose muupenyu, tinoda kuva nezvatinokoshesa. Tikasadaro zvinhu zvisinganyanyi kukosha zvinogona kutipedzera nguva inokosha, zvinhu zvinokosha zvokandirwa kwakadaro uko. Chii chinofanira kuva chokutanga muupenyu hwedu? Vakawanda vari munyika vanonyanya kukoshesa dzidzo yepamusoro kuti vazowana basa rinobhadhara. Zvisinei, Jesu akakurudzira vateveri vake achiti “rambai muchitanga kutsvaka umambo.” (Mateu 6:33) Hongu, sevaKristu, tinoisa Umambo hwaMwari pekutanga muupenyu hwedu. Mararamiro edu, zvatinosarudza, zvinangwa, uye zvatinoita, zvinofanira kuratidza kuti Umambo hwaMwari uye kuita kuda kwake ndizvo zvinokosha kwatiri kupfuura kutandanisana nepfuma uye zvinhu zviri munyika.
“NDIRI KUFARA UYE KUGUTSIKANA NEZVANDAKASARUDZA”
“Ndakabudirira chaizvo muzvidzidzo zvangu ndikawana mubayiro wokunodzidza ndisingabhadhare pachimwe chikoro chinoremekedzwa zvikuru chisiri chehurumende muguta reNew York. Vaindipa zano nezvedzidzo vakandimanikidza kuti ndinyorere kumayunivhesiti epamusoro akati wandei. Mamwe acho akandibvuma, ndikatowana mubayiro wokudzidza ndisingabhadhari paimwe yemayunivhesiti akakurumbira zvikuru muUnited States. Zvisinei, ndakaramba kuendako nezvikonzero zviviri. Ndakaona kuti kugara payunivhesiti kwaigona kukanganisa tsika dzangu, uye ndaiva nechido chakasimba chokuita basa roupiyona.
“Ndava nemakore anopfuura 20 ndiri piyona wenguva dzose. Ndinogara ndakabatikana nemabasa akasiyana-siyana oushumiri akadai sekubatsira kunodiwa vaparidzi, kuvaka Dzimba dzoUmambo, uye kuendesa ruyamuro kunenge kwaitika njodzi. Iye zvino ndiri kupinda neboka romumwe mutauro muguta reNew York.
“Pandinotarira shure pane zvandaita mubasa renguva yakazara, ndinoona kuti zvechokwadi ndakakomborerwa. Ndiri kufara uye kugutsikana nezvandakasarudza. Hapana chingatsiva zvandasangana nazvo muupenyu uye shamwari dzandiinadzo.”—Zenaida.
KUSHANDA NESIMBA MUUSHUMIRI
Tinogona kuratidza kuti tinoda Jehovha nokuisa basa rokuparidza panzvimbo yokutanga muupenyu hwedu
22, 23. (a) Nderipi basa guru revaKristu vechokwadi, uye tingaratidza sei kuti basa iri rinokosha kwatiri? (Ona bhokisi rakanzi “Ndiri Kufara Uye Kugutsikana Nezvandakasarudza”.) (b) Chii chausiri kuzorega chichiitika kumaonero aunoita basa rekunyika?
22 Tichiziva kuti mazuva okupedzisira apindana, tinoramba takaisa pfungwa dzedu pabasa guru revaKristu vechokwadi rekuparidza nokudzidzisa vanhu. (Mateu 24:14; 28:19, 20) Tinoda kutevedzera Jesu pakubatikana nebasa iri rinoponesa vanhu. Tingaratidza sei kuti basa iri rinokosha kwatiri? Vakawanda vevanhu vaMwari vanozvipira kuparidza nemwoyo wose sevaparidzi muungano. Vamwe vakaronga zvinhu zvavo kuti vashande semapiyona kana kuti mamishinari. Vachiziva kukosha kwezvinangwa zvokunamata, vabereki vakawanda vakakurudzira vana vavo kusarudza basa renguva yakazara. Vazivisi voUmambo vanoshingaira vari kufadzwa here nekushanda nesimba kwavari kuita muushumiri? Vari kufadzwa! Kushumira Jehovha nemweya wose ndiyo nzira isingambotadzi kuunza mufaro, kugutsikana, uye zvikomborero zvisingaverengeki.—Verenga Zvirevo 10:22.
23 Vakawanda vedu tinofanira kushanda maawa akawanda pabasa rokunyika kuti tiriritire mhuri dzedu. Yeuka kuti Jehovha anoda kuti tifadzwe nokushanda nesimba. Kana tikaita kuti mafungiro edu nezviito zvienderane nemaonero ake uye zvaanotaura, tinogona kugutsikana nebasa redu. Zvisinei, ngatisamborega basa rokunyika richitikanganisa kuita basa redu guru rekuzivisa mashoko akanaka oUmambo hwaMwari. Kana tichiisa basa iri panzvimbo yokutanga muupenyu hwedu, tiri kuratidza kuti tinoda Jehovha nokudaro ticharamba tiri murudo rwake.
^ ndima 6 Shoko rechiGiriki rakashandurwa kuti “muvezi” rinonzi “ishoko rinoshandiswa pamunhu anoshanda nemapuranga pangava pakuvaka dzimba kana kuti pakuveza midziyo kana zvimwe zvinhu zvinogadzirwa nemapuranga.”
^ ndima 17 Kuti uwane mamwe mashoko anotaura zvinhu zvokufunga nezvazvo paunosarudza basa, ona Nharireyomurindi yaApril 15, 1999, pamapeji 28-30, uye yeChirungu yaJuly 15, 1982, peji 26.